လက်ပံတောင်း ဖြစ်စဉ် အကျဉ်း | ဧရာဝတီ
လက်ပံတောင်း ဖြစ်စဉ် အကျဉ်း
လင်းသန့်| November 30, 2012 | Hits:343
19 | | လက်ပံတောင်း စီမံကိန်းတွင် သာသနိက အဆောက်အအုံများ အကာအကွယ်ပေးရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ကြသည် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် စီမံကိန်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဝက်မှေး၊ ဆည်တည်း၊ ကန်တောနှင့် ဇီးတော စသည့် ရွာပေါင်း ၂၆ ရွာမှ လယ်မြေဧက၇၈၀၀ ကျော်သိမ်းဆည်း ခံထားရခြင်းကို မကျေနပ်ရာမှ စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုများ ယခုနှစ် မေလမှစ၍ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ထိုဒေသ၌ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်မှစတင်ကာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့နောက် တင်းမာမှုများ အရှိန်မြင့်လာခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း မြေယာသိမ်းထားမှုများကြောင့် ချီတက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည့် မသွဲ့သွဲ့ဝင်း အပါအ၀င် ဒေသခံတချို့၊ အကူအညီ ပေးသူများကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးကာ မုံရွာအကျဉ်းထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီမှပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ကိုဂျင်မီ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့တို့ကစစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးနှင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများအပြီး ထိန်းသိမ်းထားသူများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှ စတင်ကာ လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုကို လူအများ ပို၍ သိရှိစိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။
သို့သော် လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နေသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ မြန်မာ့ ဦးပိုင် လီမိတက်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စီမံကိန်းဒေသရှိ ကျေးရွာသူရွာသားများအကြား ညှိနှိုင်းမှုများ အဆင်မပြေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် လက်ပံတောင်းတောင် အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီမှဦးဆောင် ကျင်းပသည့် လက်ပံတောင်း ပြည်သူ့ညီလာခံတခုကို အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဆားလင်းကြီး မြို့နယ်၊ ဖောင်းကတာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆည်တည်းကျေးရွာ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါ ညီလာခံသို့ လူအင်အား ၃ ထောင်ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြရာ စီမံကိန်းနယ်မြေ ဒေသမှ ရွာပေါင်း ၂၆ ရွာမှ ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များ၊ သံဃာတော်များ၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ၊နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လက်ပံတောင်းတောင်အရေး လေ့လာလိုသူများ၊ သတင်းမီဒီယာများလည်း ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ညီလာခံတွင် လက်ပံတောင်းတောင်အရေးအပြင် ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမဝင် နေထိုင်နေကြသော ဘင်္ဂါလီများအရေးတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များက အဆိုတင်သွင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂ ရက်တာ ကျင်းပခဲ့သည့် အဆိုပါ ညီလာခံမှ အများ သဘောတူညီချက် ၂၆ ချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ၊ ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီတို့မှ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောဆိုလာခဲ့သည့်အတွက် လက်ပံတောင်း ဒေသခံများက ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်သည်အထိ ဆန္ဒပြမှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကြေညာကာ နေ့စဉ် ရက်ဆက် သရုပ်ပြဆန္ဒပြမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်း လက်ပံတောင်းအရေးသည် ပို၍ လူသိများလာခဲ့သည်။
အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာ ဘားရက် အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်သည့် နေ့ဖြစ်သော နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီရှေ့နှင့် လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ရာ နေရာတို့တွင် သပိတ် စခန်း ၂ ခု စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ထိုမှတဆင့် မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ စသည့် ဒေသများမှ ရဟန်းသံဃာများလည်း သက်ဆိုင်ရာ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ၊ ဦးပိုင် လီမိတက်များကိုလည်း ဒေသခံများက အကြမ်းမဖက်ရေး၊ အစိုးရကလည်း ဒေသခံများအပေါ် အကြမ်းမဖက်ရေးတို့ အတွက် သပိတ်စခန်းများတွင် လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
လက်ပံတောင်းအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံး ကျင်းပသွားခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် NLD ပါတီ ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရန် မေးမြန်းပြီး စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တရပ်ဖွဲ့စည်းကာ စီမံကိန်း ဆက်လုပ်ရန် သင့်၊ မသင့် ကော်မရှင်က စုံစမ်းပြီး အဖြေရှာရေး ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာတစောင်ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က တင်သွင်းခဲ့သည်။
၄င်း အဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ကိုယ်စား ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင်က စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများကို သိမ်းဆည်း လယ်မြေများနှင့် ပတ်သက်၍ လျော်ကြေးလည်း ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင်များလည်း ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အစားထိုး နေရာသစ်များ ဖန်တီးပေးခြင်း စသည်တို့ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ စီမံကိန်းသည် မြန်မာ- တရုတ် ၂ နိုင်ငံ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆို လုပ်ကိုင်ထားသည့်အတွက် စာချုပ်အားတဖက်သတ် ဖျက်သိမ်းပါက နစ်နာကြေး ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပွင့်လင်းစ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ၏ ယုံကြည်မှု ပျက်ဆီးသွားနိုင်ပြီး တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာများ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်း၍ မရကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြသွားခဲ့သည်။
သို့သော် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကလည်း တခဲနက်ထောက်ခံ၍ လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ရေး ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှတဆင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ထိုနေ့က အတည်ပြုခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က လက်ပံတောင်းအရေး ပြေလည်စေရန်အတွက် အဆိုပါ သပိတ်ခေါင်းဆောင်များ၊ သံဃာ တော်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရပ်ဆိုင်းရန် အခက်အခဲရှိကြောင်း၊ စီမံကိန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်း ကြောက်ရကြောင်း၊ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ရပ်တန့်လိုက်သည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံက စိတ်ဆိုးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် တိုင်းပြည်ပျက်သည့် အချိန်ကစပြီး ကူညီပေးခဲ့သည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံကလည်း ကျေးဇူးရှိသည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူများ၏ လိုလားချက်များကို သမ္မထံ တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုသို့ပြောဆိုမှုနောက်ပိုင်း သပိတ်စခန်း ၅ ခု အထိ အင်အားများလာခဲ့ပြီး တင်းမာမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်ကလည်း မုံရွာဒေသရှိ ဒေသခံများ၊ သပိတ်စခန်းများသို့ သွားရောက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဦးပိုင်နှင့် ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီများသို့ ထိတွေ့ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ကာ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေး ကြိုးပမ်းမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း လက်ပံတောင်းအရေး ပြေလည်မှု ရှိစေရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ည ၁၂ နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး သပိတ်စခန်းများက ဖယ်ရှားပေးရန်၊ မဖယ်ရှားပေးပါက တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်ဟု အမိန့်ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုသို့ ကြေညာအပြီး ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဝင်းထဲမှ အသံချဲ့စက်ဖြင့် သပိတ်စခန်းများသို့ သတိပေး ကြေညာပြီးနောက် သံဃာများနှင့်ရဲများ တင်းမာမှုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ရဲများနောက်ဆုတ်သွားခဲ့သည်။
သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မုံရွာမြို့ကို ရောက်ရှိမည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၃ နာရီခန့်တွင် ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီ အနီးဝန်းကျင်ရှိ သပိတ်စခန်းများကို ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ၀န်းထဲတွင် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားကြသည့် လုံထိန်း ရဲများက မီးသတ်ပိုက်များသုံး၍ ဖြိုခွဲ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံး သုံးခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထိုကဲ့သို့ အင်အားသုံး ဖြိုခွဲလိုက်ခြင်းကြောင့် သပိတ်စခန်းများရှိ သံဃာများ၊ ဆန္ဒပြသူများ ထိုခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိကြကာ ရဟန်းသံဃာများ အပါအ၀င် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ အနည်းဆုံး ၇၀ ကျော်ရှိပြီး ထိုအထဲတွင် လူနာ ၂၀ ဦးသည် စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေရှိကြောင်း၊ သံဃာ ၂ ပါး မန္တလေး ဆေးရုံသို့ ဆေးကုသခံယူရန် အရေးပေါ် ပို့ခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှ ဆန္ဒပြမှုကို ဖြိုခွဲမှုသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျကျ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ အရေုးယူ ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးကိုသာ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး မီးလောင်ဗုံး မသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် အဆိုပါကြေညာချက်ကို နာရီပိုင်းအတွင်း ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည်လည်း ထိုနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မုံရွာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူများနှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မုံရွာ လူထုကို လက်ပံတောင်းအရေး ပြေလည်အောင် ကြိုးစားမည်ဟု မိန့်ခွန်းတရပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် မုံရွာဆေးရုံသို့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရ၍ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသွားကြသူများကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ အားပေး စကားပြောကြားခဲ့သည်။ ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်လည်း မလိုအပ်ဘဲ အကြမ်းဖက် ဖြေရှင်းခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမည်ဟု နောက်ထပ် မိန့်ခွန်းတရပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် တည်းခိုရာ ဟိုတယ်တွင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး သပိတ်ခေါင်းဆောင် မသွဲ့သွဲ့ဝင်း အပါအ၀င် ဒေသခံ ရွာသူ၊ ရွာသားများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာ ကော်မတီဖွဲ့ စစ်ဆေးရန် လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်
လက်ပံတောင်း သပိတ် ဖြိုခွင်းမှုပါ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆို
လက်ပံတောင်း မီးလောင်သံဃာ ဆေးကုသစရိတ် မလုံလောက်
လက်ပံတောင်း အစီရင်ခံစာ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့ တာဝန်ပျက်ကွက်နေ
လက်ပံတောင်း အင်အားသုံး ဖြိုခွဲမှု ၈ လပြည့် ဆန္ဒပြ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment MM December 1, 2012 - 2:17 am	၀မ်ပေါင်ဝင်းထဲကလုံထိန်းများနှင့် သပိတ်ဖြိုခွဲရေးတာဝန်ကျရဲနှင့်ဝန်ထမ်းများ သို့ ..
ခင်ဗျားတို့သိသမျှ အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းပြုစုထား (သို့မဟုတ်) မှတ်ထားကြပါ။ တနေ့မှာ သက်သေခံအဖြစ် ရောင်းစားလို့ရပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့အမည် မပေါ်စေရပါဘူး။
Reply	မင်းမျိုးနိုင် December 1, 2012 - 4:41 am	သပိတ်ခေါင်းဆောင်မသွဲ့ဿ သွဲ့ဝင်းကိုဝန်းကြရံကြ၊လွတ်တော်ထဲကကြံ့ဖွတ်အမတ်တွေအားလုံး
Reply	ကညာပျို December 2, 2012 - 5:15 pm	မန်းဒလေးမှာတရုတ်တွေဘာလို့များနေတာလည်း
လိုက်တာလား. မလိုချင်ဘူး တရုတ်တွေချက်ချင်းထွက်
Reply	လဝ December 2, 2012 - 5:17 pm	မန်းဒလေးမြို့ကြီးကို တရုတ်ထံရောင်းစားလိုက်ပြီး
Reply	ဆလိုင်း December 2, 2012 - 5:21 pm	တရုတ်ကိုကြောက်လို့ ဦးစင်းတွေကိုမီးရှို့
Reply	ငပု December 2, 2012 - 5:23 pm	တရုတ်အလိုတော်ရိ့ တွေ
Reply	Pan Pwint December 2, 2012 - 8:28 pm	စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသာအေး အား တာဝန်မှ ရပ်စဲပေးပါ။
Reply	007 December 2, 2012 - 8:44 pm	စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးကို တာဝန်မှ ထာဝစဉ် ရပ်စဲလိုက်ပါ။
Reply	oomoe December 3, 2012 - 1:03 pm	ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ည ၁၂ နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး သပိတ်စခန်းများက ဖယ်ရှားပေးရန်၊ မဖယ်ရှားပေးပါက တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်ဟု အမိန့်ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
ကျွန်တော်လည်း အမိန့်ထုတ်ပြန် ချင်လို့ပါ
ဒီဇင်ဘာ၃၁ရက်နေ့ည၁၂နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး အာဏာရှင်စစ်အစိုးရ ဖယ်ရှားပေးရန်၊ မဖယ်ရှားပေးပါက တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်။